Restoring Family Links | Xiriirka u lumay sabab la xiriirta masiibooyinka dabiiciga ama aadanaha sababay
Xiriirka u lumay sabab la xiriirta masiibooyinka dabiiciga ama aadanaha sababay
Waxaad ka raadin kartaa qaraabadaada warbaahinta bulshada, oo dhinaca xiriirada la wadaagay ama websaydka loogu tallogalay 'Trace the Face' ('Raadi Wajiga').
Sidee ayaan kuu caawin karnaa?
Waxaan kugu caawin karnaa raadintaada ee qaraabada haddii aad lumisid xiriirka sabab la xiriirto masiibada dabiiciga ama aadanaha sababo. Kani waa adeeg bilaash ah, iyo warbixintaada waxaa loola dhaqmaa si qarsoodi ah. Waxaa kaliya oo lala wadaagayaa gudaha Laanqeerta Cas ama hay'adaha kale ee dabagalayo ogolaanshahaaga cad iyo kaliya ujeedada laguugu caawinayo inaad heshid xubnaha qoyskaaga.
Si aad u bilowdid nidaamka raadinta qaraabadaada, raac tallaabooyinkaan:
Nala soo xiriir si aad balan u sameysatid.
Imaw xafiisyadeena ee waqtiga la diyaariyay.
Nasii warbixin loo baahanyahay oo saxiix foomamka quseeyo.